Global Voices teny Malagasy · 4 Jolay 2018
04 Jolay 2018
Tantara tamin'ny 04 Jolay 2018
Novonoin'ny mpandoto rindrina antserasera ve ilay Japoney bilaogera malaza manam-pahaizana ara-piarovana aterineto?
Azia Atsinanana04 Jolay 2018
Bilaogera Japoney fanta-daza iray no maty voatsindrona antsy tao Fukuoka Growth Next. Fantatra fa hanao lahateny momba ny fomba hiatrehana ny fanorisorenana an-tserasera izy. Kanefa dia novonoin'ny olona voalaza fa mpandoto rindriny manokana.
Karaiba04 Jolay 2018
Azia Atsimo04 Jolay 2018
Korea Atsimo: Namono tena izy rehefa voaheloka ho nanolana ny vadiny
Korea Atsimo04 Jolay 2018
Sambany vao nisy lehilahy voaheloka noho ny fanolanana ny vadiny tany Korea Atsimo, ka nahatonga ity lehilahy ity hamono tena.
Amerika Latina04 Jolay 2018
(Marihina fa tamin'ny 25 May 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy) Nampahafantatra tamin'ireo mpamaky ny gazety tao Arzantina fa nanao fifanarahana tamin'i CAPIF, ilay orinasa misolo tena ireo orinasan'ny famokarana hira ao Arzantina ireo mpisera aterineto sasany mba handoa vola ho onitr'ireo hira nalain'izy ireo tsy ara-dalàna tao amin'ny aterineto. Asehon'izany...
Taorian'ilay New Media Forum vao haingana, nivoaka an-gazety teo an-toerana ny hetsika natao ho an'ny mpianatra sy ny matihanina amin'ny media tao Tbilisi, Zeorzia.